Home Wararka Qaar ka mid ah Bulshadda Soomaaliyeed oo ku baaqaya in Farmaajo iyo...
Qaar ka mid ah Bulshadda Soomaaliyeed oo ku baaqaya in Farmaajo iyo Kheeyre ay Tanasulaan si dalka loo badbaadiyo!!
Bulshada Soomaaliyeed ayaa Bilaaway Hamigii Dowladnimo doonka kadib Doorashadii Madaxweyne Farmaajo balse waxaa mar qura isbadalay hamigii iyo rajadii shacabka soomaaliyeed ay ka qabeen dowladda farmaajo uu hogaamiye kadib markii uu sameeyay falal lidi ku ah jiritaanka qarannimada soomaaliyeed.
Shacabka soomaaliyeed ayaa haatan quus ka taagan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo maadama uu dalka u wado meel aan kazoo kabsasho laheeyn.
Farmaajo ayaa arintii ugu danbeysay oo ay shacabka ka xumaadaan sameeyay kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Eritrea uuna caalamka ka codsaday in cunaqabateenta laga qaado dalka Eritrea oo horay loogu eedeeyay in uu garabsiiyo kooxaha argagaxisada eee dagaalka kula jira dowlada, waxayna shacbiga soomaaliyeed arintaasi ku tilmaameen mid uu ugu gol leeyahay madaxweyne farmaajo in uu ku burburiyo dalka iyo dadka soomaaliyeed jiritaankooda.
Dhiibistii qalbi dhagax waa arin kale oo shacabka ka careysiisay dowladda soomaaliya oo ay horkacaan farmaajo iyo kheyre waxa ay go’aan sadeen in muwaadin soomaaliyeed ay u gacan geliyaan dowladda itoobiya si uu san u muujin falalka guracan oo ay itoobiya ka geysaneyso gudaha dalka.
Ugu danbeeyntii hadii aan usoo daadago nuxurka hadalka shacabka soomaaliyeed ayaa ah in farmaajo iyo kheyre ay iska wareejiyaan talada dalka maadaama ay u wadaa meel aan laga soocelin Karin sharafka iyo sumcada umada soomaaliyeed.
Iyagoo shacbiga soomaaliyeed ka dalbaday farmaajo iyo kheyre in ay tanaasulaan silo badbaadiyo jiritaanka qaranka soomaaliyeed.
Previous articleDr-Muqtaar’’Dowladu waxaa ay isku hoowshay wax aan looga baahneeyn runto sheega waad fashilanteene’’
Next articleGudoomiyayaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir oo Xafiiska Rw-Kheeyre Iska Xaadirinaya si Xilalkooda Loogu dhaafo!!
Madaxweyne Deni oo xil culus u magacaabay wariye Jaamac (Dabaraani)
AQRISO: Maamulka Galmudug oo War Kaso Saaray Weerarki Cabdi Qeybdiid